IChipolo One Spot, indawo yokuqala ehambisana ne-Apple's Search | Izindaba ze-IPhone
IChipolo One Spot, nansi indlela indawo yokuqala esebenza ngayo ne-Apple Search esebenza ngayo
I-Apple imemezele izolo uhlelo lwayo olusha lwe- "Search" abanye abakhiqizi abangafaka ngalo amadivayisi abo okulandela umkhondo kunethiwekhi ye- "Search" ye-iOS, futhi UChipolo ube ngomunye wabokuqala ukumemezela umkhiqizo wakhe omusha, nayo yonke imininingwane yokuthi uzosebenza kanjani.
Umkhiqizo wokuqala weChipolo ohambisana ne-Apple's Search kuzoba yi- «Chipolo One Spot», idiski encane emnyama esingayibeka eringini lokhiye, esikhwameni semali noma ephaketheni, futhi lokho kuzosivumela hhayi kuphela ukuthola okuthile esingakhumbuli ukuthi besikushiye kuphi kodwa futhi nezinto esizilahlekele kwenye indawo ekude. Le nsizakusebenza encane izotholakala ngombala omnyama futhi izovimba amanzi, ibhethri elizohlala unyaka wonke futhi elingashintshwa ngemuva kwalesi sikhathi. Izophinda ibe nesipika esizokhipha umsindo ofika ku-120dB, ukuthola idivayisi yakho.
I-Chipolo izosebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-iOS "Sesha", esizoyixhumanisa ne-iPhone yethu kwezinye izindlela ezilula. Uma lokhu sekwenziwe singakwazi:
Thola izinto: ungathola i-Chipolo One Spot yakho ngohlelo lokusebenza lokuSesha, ukhombisa indawo yokugcina eyaziwayo.
Yenza imisindo: uma indawo yakho eseduze ungayenza ikhiphe umsindo ukuyithola.
Imodi elahlekile: uma ulahlekelwa yinto onamathisele kuyo iChipolo One Spot yakho, ungayifaka "kumodi elahlekile", ukuze kuthi lapho othile eyithola uthole isaziso. Uma othile ngaphandle komnikazi wayo eyithola, ungasebenzisa uhlelo lokusebenza lwe- «Search» ukuyikhomba, futhi uzongena kuwebhusayithi lapho kuzovela khona umyalezo oshiywe ngumnikazi, kanye nemininingwane yokuxhumana ukuze ukwazi ukuwubuyisa.
Konke lokhu kwenzeka ngokuphepha okuphelele lapho ubumfihlo bakho buzoqinisekiswa khona ngenxa yokubethela kokuphela kokuphela, i-Apple noma iChipolo ngeke ikwazi ukuthola amadivayisi akho nganoma yisiphi isikhathi. Futhi ngeke kube nemali ekhokhwa nyangazonke yale nsizakalo. Lo mkhiqizo wokuqala weChipolo, i-One Spot, uzotholakala ukubhukelwa ngenyanga kaMeyi, kanti ukuthunyelwa kokuqala kuzoqala ngoJuni. Unemininingwane engaphezulu nokuthi ungabhuka kanjani kuwebhusayithi esemthethweni yeChipolo (isixhumanisi)
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iPhone » Izesekeli ze-IPhone » IChipolo One Spot, nansi indlela indawo yokuqala esebenza ngayo ne-Apple Search esebenza ngayo
Ngisanda kuthenga ama-chipolos ambalwa, futhi ngiyabona ukuthi awahambisani ne-APP ye-iphone ... bebengakwazi vele ukuguqula lawa wamanje abe yi-APP kunenye indlela ezungezile.
Phendula ukuze unciphise
Ngakho-ke ungahlola i-interface yomsebenzisi ye-Galaxy
Ama-AirPods enkohliso 3 Enziwe Ngaphambi Kwe-Apple Originals